I-Horoscope yomculi, unyaka we-rabbit
Ngo-Mashi, uzozizwa ukuthi awukwazi ukuphila okufanayo. Ngisho nokuzinza kwezezimali kanye nobudlelwane obuhambisana nomlingani akukwazi ukukuvimbela. Yonke amandla iqondiswa ekuhlangenwe nakho okusha, empilweni entsha, kumaphrojekthi amasha, yiziphi - uzobe uzimisele endleleni. Mashi-Meyi uzokunika ithuba lokwenza into oyikhonzile - ukubhala, ukudweba.
Mhlawumbe, imidlalo yokuthuthukisa izingane yengqondo izoba nesithakazelo, futhi ukuphakama kwezemidlalo kanye nobuciko kuzoba yinto enhle. Ekupheleni kukaMeyi noJuni uzojabulela umsebenzi wakho. Ngo-Agasti, kuyoba kuhle ukuhamba futhi ube nokuphumula kwelinye izwe eliyingqayizivele. Amantombazane angashadile lapho angakwazi ukuhlangabezana uma kungenjalo uthando lwalo lonke impilo, khona-ke umngane omuhle nomlingani webhizinisi elizayo. Kulesi sihloko esithi "I-Horoscope yeSagittarius, Unyaka We-Rabbit" sizokutshela ukuthi unyaka onogwaja uzoba yini uphawu lwe-zodiac - Sagittarius.
Labo abazalwa ngoNovemba 23-30
Kuze kube ngu-Mashi 3, uzoba nethuba lokufunda ngokuziphendulela futhi ngesikhathi esifanayo ukuphatha izinto eziphathekayo ngokuzithoba. Imali ingafika futhi ihambe. Kusukela ngoFebhuwari 24 kuya ku-Mashi 14, umbusi wakho uJupiter uzosiza ekuphumeleleni ezindabeni ezihlobene nemidlalo, ubuciko, izingane. Ngasekupheleni kukaMeyi - ekuqaleni kukaJune, uzothola ithuba lokuthenga noma ukuthengisa ikhaya. Kuze kube sekupheleni konyaka, i-Uranus engalindelekile izokunika isikhathi sokuphumelela kokudala nokuqonda.
Labo abazalwa kusukela ngo-1 kuya ku-10 kuDisemba
Kusukela ngoFebhuwari kuya kuMeyi, uthisha ohlakaniphile uSaturn uzokusiza ukulungisa izinhlelo zakho futhi ubuyekeze ubuhlobo obunobungane. Kusukela ngo-Mashi 12 kuya ku-Ephreli 25 isikhathi esihle sokubalekela othandweni noma amaphrojekthi okudala, mhlawumbe ukuphathwa kwabantu abacebile njengabacabanga. Ngo-Ephreli-May, umlingani wakho uzothola amathuba okuthola imali eyengeziwe. Kuyinto efiselekayo ukutshala ngokushesha into ewusizo, isibonelo, ukulungisa indlu noma ukuphumula.
Labo abazalwa kusukela ngo-11 kuya ku-21 kuDisemba
NgoFebhuwari, ngenxa yeChiron, yisikhathi esimangalisayo kubafundi - lonke ulwazi lungcono futhi lungahlonishwa kahle, lucutshungulwa futhi lufaniswa. Kuhle kakhulu ekufundeni izilimi. Ngakho-ke, thatha leli bhizinisi ngokungathí sina futhi ngokuziphendulela. Kuze kube phakathi kuka-Mashi, ngaphansi kwethonya lika-Uranus, nawe uyoba izingane - eziphuthumayo futhi ezingenakulinganiswa, futhi indlu iyoba yifanekiso ye-hotbed for interests, lapho ungahlangana khona nabantu abathandekayo nabawusizo.
Lo nyaka, ngaphansi kwethonya lomlingisi we-Black Moon kanye ne-Uranus enomdlandla, ungazitholela ezimweni ezihluke kakhulu. Kusukela ekupheleni kukaMashi unyaka wonke, unengozi "yokungena emlandweni." Umsebenzi oyinhloko uzoba ukuzivikela emzimbeni wokuzizwa, ama-antics ahlaseleyo, ukuzonda okusheshayo emehlweni enhle omuntu. Qaphela abaphangi abashadile futhi bazinikele ezithembisweni zamadoda angenasidingo. Kudingekile ukuthi ufunde ukubona okuhle nokubi. Kulokhu uzosizwa ngenkuthalo yi-White Moon. Kodwa ukuphela kwesibindi akusho neze. Kumuntu oye waqala ukuzivikela, uyazi ukuthi angazilawula kanjani futhi aqonde ukuthi lokho kuchitha umzimba nomphefumulo kuphela, akukho lutho olusongelayo. Ukwesekwa nokuhlonipha kuphela kuyakusiza ukuba uthole ukuvumelana ngobudlelwane obuseduze.
Izindinganiso zokuphila emndenini zizoshintsha ekuqaleni konyaka. Eqinisweni, zonke lezi ziyizinkathazo zombumbano ongaqondakali weplanethi: izilingo ze-Black Moon, i-humorist Jupiter, i-joker Chiron no-Uranus onothando. Kuze kube ngu-Mashi, wonke amaphuzu obuthakathaka omndeni azobonakala. Kukhona izimo emva kwalokho okudingekayo ukulungisa. Ngo-May-Juni kuyoba nesidingo sokuhambisa. Lesi yisikhathi esimangalisayo sokubheka ukulungiswa kwezihlobo, futhi iningi lizobhekana nezinkinga zokuziphendulela. NgoSepthemba, ngoNovemba noDisemba, kunethemba lokuthola noma ukuthola izindlu kulelifa.
Ekuqaleni konyaka, ngamunye wenu uzothola izinguquko zakho empilweni. Omunye wabahlobo uzoba nokulahlekelwa, izinkinga emndenini, imfucumfucu ethile kanye nezinkinga emsebenzini, omunye umuntu - ubudlelwane bokupholisa nama-suchenes. Ngezinye izikhathi phakathi nonyaka uyobe ungaboni, kodwa umuzwa wokuthi "ukubiza nje futhi ngizofika" kuzokwenza wonke umuntu afinyelele. Kusukela ngoJuni uzothola ukusekelwa kwabahlobo okungokoqobo kakhulu: usizo ekulungiseni, ukwelulekwa ekushintsheni komsebenzi omusha (isikhundla), izinkulumo zenhliziyo kuya kwenhliziyo. Futhi kusukela maphakathi no-Agasti uzoba ingelosi enomusa, ohlala ebonakala ngokuhlangene futhi eveza ukusekelwa okudingekayo kokuziphatha okuningi.
Esikhathini sokuqala sonyaka, unamandla anamandla nempilo yawo wonke umuntu nakho konke. Ngo-May-Juni, zama ukungasebenzisi kabi utshwala nokudla okunamafutha. Buka ukudla kwakho futhi, uma kunokwenzeka, uhambisane nokudla - okungcono kakhulu, kodwa kaningi. Imikhiqizo ephumelelayo yamandla kuwe: inyama, inhlanzi, izikhupha zamaqanda, isibindi sesilwane, amazambane efaneni, i-ulethisi, utamatisi, i-pepper, i-zucchini, i-corn, i-horseradish, u-buckwheat, ilayisi elibomvu, izithelo ze-citrus, amakhiwane, umlimi omuncu, ama-apula, amapheya. Kusukela ngoJulayi, ukunyuka kwakho kukho konke (ukwedlulela ngokweqile, ukwedlula ngokweqile, ukudla ngokweqile) kungathinta impilo yakho. Ngo-Julayi, Agasti, September, qaphela: ukulimala kungenzeka ezimweni ezimbi kakhulu. NgoJulayi 2-4, ngo-Okthoba 27 - Novemba 8 - isikhathi esihle sokususa amakhilogremu angaphezulu, ukuhlwaya kwamantombazane e-anti-cellulite kusihlwa.
Kulo nyaka ophumelelayo wokuziqhenya kwakho awukwazi nje ukuzuza, kepha ukuthola imali enkulu. Ezinyangeni ezintathu zokuqala, inhlanhla yezimali iyakuthanda kakhulu. Ngasekupheleni kukaMeyi - ekuqaleni kukaJune, ngenxa yokungqubuzana phakathi kukaSaturn noPluto emibangweni yakho yemali kanye nemisebenzi, kungase kube khona ukungezwani, umuzwa wokuthi izwe lonke licindezela kuwe. Kodwa phakathi nalesi sikhathi ukuthi impumelelo yesikhathi esizayo ibekiwe, okufanele ifike ekupheleni konyaka. Ngalesi sikhathi, kungenzeka ukuthi intukuthelo evela ku-Black Moon nase-Uranus kungenzeka. Ukulawula nokuzibonela kungukubambisana kwakho. Igunya lakho lisesandleni sakho. Kule nkathi kukhona izinkinga ozakwabo kanye nozakwabo, ubunzima, kokubili ebhizinisini nasemkhayeni. Bonisa konke ukuguquguquka kwakho, ukuhlakanipha, ukubekezela. Kuwo wonke unyaka, ungacabanga ngamasu okudala ibhizinisi lakho. Ngo-Agasti, hlela ibhizinisi ukuvakashela phesheya. Ngo-Septhemba, uzophakanyiswa ukuba usebenze noma uzoba nethuba lokuhlela ibhizinisi lakho. Manje uyazi ukuthi i-horoscope yomculi izoba yini, unyaka wogwaja.
I-Horoscope ye-Capricorn, owazalwa ngonyaka we-tiger ngo-2010
I-horoscope yomuntu siqu yenqama ngoJanuwari
I-Horoscope ka-2010: Ama-Aries, Tiger
I-Horoscope ekuhlanganiseni kwama-constellations, izilinganiso ne-scorpion, ngo-Okthoba 2010
Indlela yokwenza amandla wesifazane
Ama-Burger Vegetarian nama behon
Inkinga yokuziphatha kwengane
I-Feng Shui Impilo: Amathiphu namaTalism
Ithonya lemvelo esikhumbeni
UKeanu Reeves: idemoni ngaphakathi
Yiziphi amanzi eziwusizo emzimbeni womuntu
Ukususwa kwe-lip engenhla
I-Veal iqoqa nge-sauce ukhilimu
Izibopho ze-Cod ngaphansi kwe-crust
Indlela yokukhohlisa isifiso sokudla
Umphumela emzimbeni womuntu wemisipha ye-electromagnetic yemishini ye-laser kanye ne-ultraviolet